Unyango - Shijiazhuang YiLing Hospital
Iindibaniso amayeza emveli ase-China kunye Koloni unyango ebanzi. Kubalulekile ukuba ukudibanisa amayeza emveli ase-China kunye amayeza asentshona, kwaye uthathe unyango ekujoliswe NgokoMgaqo-siseko emzimbeni zabantu ezahlukeneyo. Ikakhulu kuqukwa: Amayeza Chinese Traditional kunye noviwo amayeza yesiqhelo Western, amayeza emveli ase-China kunye nonyango nokubandakanywa amayeza Western, TCM decoction, unyango amayeza ngomlomo, impilo yomzimba, enye unyango, ezifana unyango ezizodwa ezifana stem cell therapy, njl
unyango amayeza Chinese Traditional ibandakanya:
1) yemveli unyango amayeza Chinese, ezifana imithi, moxibustion, yokuthanjiswa, cupping, ukukrwela njalo njalo.
2) iimpawu amayeza Chinese: bath zonyango element-Five, element ezintlanu-zomculo unyango, iimpawu moxibustion;
3) TCM kwimo Athletic: lezemidlalo zemveli, efana Tai Chi / ikarati, idityaniswe kunye nophuhliso kwezifo mihla, ukuphuhlisa kwanonyango entsha yezemidlalo efanelekileyo kwimo izifo, ukukhuthaza ubuzaza ngokwasemzimbeni kunye nokuphucula ukusebenza konyango.
4) therapy ukutya Chinese: ukudla yeyona ndawo ibalulekileyo ebomini. A yokudla kubaluleke kakhulu ukuba kwimo umzimba.
5) Imfundo ngezempilo: emva kokuphela unyango, ukugcina indlela karhulumente recovery elungileyo, iingcali zethu siya kuphumeza yokufundisa kwimo yempilo ngemihla.
Kuba unyango somhlaza, yoma dystrophy, isifo motor neuron, rheumatism, udinwe, scleroderma, isifo sezintso, isifo sezintso, isifo seswekile, njalo njalo, ukuba kusetyenziswa uhlobo lonyango, hlobo luni na isiphumo unyango kulindeleke, nceda ushiye umyalezo okanye xhumana yincutshe.